गुर्जो मात्र होइन, यी ५ खानेकुराले बढाउँछ कोरोनासँग लड्न इम्युनिटी पावर - Dainik Online Dainik Online
गुर्जो मात्र होइन, यी ५ खानेकुराले बढाउँछ कोरोनासँग लड्न इम्युनिटी पावर
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १२ : ०९
खानपानमा ध्यान नदिँदा इम्यूनिटी पावरमा कमी आउँछ ।
अहिले केही रिपोर्ट्सहरूले इम्यूनिटी पावर कमजोर भएकाहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा बढी हुने जनाइरहेका छन् ।
खानपानमा विशेष ध्यान दिंदा इम्युनिटी पावर बढाउन सकिन्छ । एक नयाँ अध्ययनका अनुसार इम्यूनिटी पावर बढाउनका लागि खानामा केही विशेष परिकार समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले बजारमा गुर्जोको सेवनबाट कोरोनासँग लड्न सकिने भन्दै यसको प्रयोग व्यापक बनाइएको छ ।
तर गुर्जो बाहेक अन्य खानपानले पनि सरिरमा इम्युनिटी पावर बढाउन सहयोग गर्छ ।
यी ७ चीज, जसले इम्यूनिटी पावर बढाउन सहयोग गर्छ
रातो क्याप्सिकनमा सबैभन्दा बढी भिटामिन सी पाइन्छ । अमेरिकी कृषि विभागका अनुसार एक टुक्रा क्याप्सिकनमा करिब २ सय ११ प्रतिशत भिटामिन सी हुन्छ ।
जुन सुन्तलामा पाउने भिटामिन सीभन्दा दुई गुणा बढी हुन्छ । २०१७ मा नेशनल इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार भिटामिन सी शरीरमा त्यी कोशिकाहरूलाई मजबूत बनाउँछ, जसले इम्यूनिटी बढाउँछ ।
बोकाउलीमा भिटामिन सी अत्याधिक मात्रामा हुन्छ ।
आधा कप ब्रोकाउलीमा ४३ प्रतिशत भिटामिन सी हुन्छ । अमेरिकाको इएचई हेल्थका फिजिशियन डा. सीमा सरीनले भनेका छन्,‘ब्रोकाउलीमा फाइटोकेमिकल्स र एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा भरपूर हुन्छ जसले हाम्रो इम्यूनको मजबुत बनाउँछ ।
चनामा प्रोटिन अत्याधिक हुन्छ । एकेडेमी अफ न्यूट्रिसन एण्ड डाइटेटिक्सका अनसार चनाले एन्जाइमलाई सन्तुलनमा राख्छ, जसबाट हाम्रो शरीरले ठीक तरिकाले काम गर्न सक्छ ।
डाइटिशियन एमिली वन्डरका अनुसार चनामा प्रचुर मात्रामा जिंक पाइन्छ जसले इम्यून सिस्टम र इम्यून रेस्पोन्सलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ ।
लसुन खाँदामा स्वादिलो हुनुका साथै स्वास्थ्यका लागि पनि निकै लाभदायक हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
लसुनको सेवनले उच्च रक्तचाप तथा मुटुरोगको खतरा कम गराउँछ । यस्तै यसमा पाइने सल्फर यौगिकका कारण संक्रमणबाट लड्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । लसुनको सेवनले इम्यूनिटी समेत बढ्दछ ।
च्याउ भिटामिन डीको स्रोतहरूमध्ये एक हो । च्याउको सेवनले क्याल्शियम बढाउँछ जसले हड्डीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । साथसाथै यसले इम्यूनिटी पावर बढाउनमा सहयोग गर्छ ।
पालकमा भिटामिन सी र एन्टीअक्सिडेन्ट्स अत्याधिक मात्रामा हुन्छ । जसले हाम्रो शरीरमा रहेको कोशिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्छ । पालकमा भिटा क्यारोटिन समेत पाइन्छ, जुुन भिटामिन एको मुख्य स्रोत हो । भिटामिन ए ले इम्यून फंक्शनको सही ढंगले चलाउनका लागि सहयोग गर्छ ।
दही प्रोबायोटिक्सको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । यसमा भएको ब्याक्टेरियाले पाचन प्रणाली तथा इम्यून सिस्टमलाई सही राख्दछ । केही अध्ययनहका अनुसार दहीको सेबनले प्रोबायोटिक्सको सामान्य रुघाखोकी तथा इन्फ्लूएन्जाजस्ता संक्रमणसँग पनि प्रभावकारी ढंगले लड्दछ ।
कोरोनाको प्रभाव : ढिकीजाँतो र हाते मुसलको आवाज गुञ्जिन थाल्यो
वृद्धाको निकै कष्टकर जीवन : कसैले ल्यायो भने, खान्छु नत्र कैयौँ दिन भोकै …
घरभित्रै अभिभावकसँग टाढिँदै छन् बालबालिका ? यसरी समाधान गर्नुस !
श्रीमान्–श्रीमतीले सम्बन्ध राम्रो बनाउन पनि गर्नुपर्छ झगडा !